အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀ိုင်းရံကြလော့ …
အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀ိုင်းရံကြလော့ …
တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆန်ကုန်မြေလေး ....လူမလေး ခွေးမခန့် အောက်တန်းစား
သူခိုး ဒမြ လူသတ် ဘုန်းကြီးသတ် သံဃာ သင်းခွဲ တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးကို မကြည့် ...
အာဏာကိုသာ ငမ်းငမ်းတက် ကြည့်ပြီး....တရုတ်လက်တိုင်းပြည် ထိုးအပ်...
ညီနောင်ချင်းချင်း သွေးခွဲအုပ်ချုပ် တစ်ပွဲထိုး ငြိမ်းချမ်းရေး ဗန်းပြ....ထင်ရာဆိုင်း
လက်နက်အားကိုး ခွေးသူခိုးများကို ငတို့ ပြည်ထောင်စု အမိမြေမှ....
မိကွဲ ဖကွဲ သားကွဲ မယားကွဲ ဘ၀ ထိုထို ဖြင့်ကျင်လည် ကြကုန်သော....
နိုင်ငံရပ်ခြားသွား ဒုက္ခိတ သတ္တ၀ါ လူငယ်တို့သည် လည်းကောင်း....။
တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စား မတ်တပ်စာ သာရှိ တုံးလုံးစာ မရှိကြကုန်သော....
ပညာနုံ့နည်း ဆင်းရဲသား ဒုက္ခိတ သတ္တ၀ါ ထက်အောက် မြစ်ဝှမ်း မှီတင်းနေထိုင်
တိုင်းရင်းသား အပေါင်းတို့သည် လည်းကောင်း.....။
ဘွဲ့ရ စာမတတ် ဟိုဒီသင်တန်းတက် ယက်ကန်ကန် နဲ့ ....ဟိုဆိုင် ဒီဆိုင် ထိုင်ကာ
မသိရှေ့ရေး.....မလွယ်သေးသမျှ...မိဘတို့ သက်ပြင်း ခါခါချရ....ပြည်တွင်းမှီတင်း...
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ....ပြည့် ဘဏ္ဍာတို့သည် လည်းကောင်း.....။
စားစရာ ချို့တဲ့ နေစရာ နုံနဲ့….အနာဂတ်မဲ့၍ တိုင်းပြည်တကယ်မချစ် …
ကျောင်းတော်က ခေါင်းဆေးမှ …ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆဲတတ်ကြလေသော….
မိဘပြည်သူ့ ၀မ်းရည် စပ်စေသည့် …အမိမြေ မှ သားကောင်(သားကောင်းမဟုတ်) များသည်လည်းကောင်း….။
တပ်မှာ စားမလောက်….ဟိုဒီ ရောက်ကာ….ဆိုက်ကားနင်း လက်သမားလုပ် ပန်းရ်ံလိုက် ကြိမ်ထိုး…ထင်းခုတ်…စသည် ရရာ
လုပ်ရင်း….မညီ မပြည့် မလှ ရလေသော…..၀မ်းမီးတို့ကို…ဆေးမြီးတိုအသွယ်သွယ်နှင့်
ဦးပိုင် အားမကိုးရ ၍ ဖြစ်သလိုညှိမ်းကြရရှာကုန်သော….အောက်ခြေ နင်းပြာ်း…စစ်သား
သား က စစ်သားပြန်ဖြစ်….သားစဉ်မြေးဆက် ကျွန်ဖြစ်ကြရလေသော….ရိုးရိုးနှင့်
ဘဂ္ဂ၀ါ ဟိုက်စကူးတက်မှ ….ဒေ၀ဒတ်နဲ့ တွေ့….မျိုးချစ်ယောင်ဆောင်….စစ်လော်ဘီ
စစ်ဘုန်းကြီး…ရွှေဝါရောင် သဃာန်းသွေးစွန်းတာ မဟ….လက်ပတောင်း မီးရှို့တာမဟ…
ဖွတ်ဘင်္ဂလီ လွှတ်တော်ရောက်တာ မဟ…..
ပြည်တွင်းမီး ဟုန်းဟုန်းမတောက်အောင်….တားဆီးဖြောင်းဖြ သူကိုမှ …ကုလားမခေါ်..
ရခိုင်နဲ့တိုက် …မျိုးချစ်အဆံချောင်တွေနဲ့တိုက်…. လူမျိုးဘာသာ ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ပြီး…
စစ်အရေခြုံ အစိုးရ သက်ဇိုးရှည်အောင် ဘုန်းကြီးတန်မဲ့ မုသားသုံး အာပါတ်သင့်ခံ…
ပြည်သူ့ ဆီက ဆွမ်းကိုစား စစ်အာဏာရှင်ကို လော်ဘီကြလေသော…ပြည်သူ့ဆွမ်းကို
သံတွေသံခဲ ပမာ မြိုကျနေကြလေသော…ကိုယ်တော်တွေ နောက်လိုက် …
အမျိုးတကယ့် ချစ် ဘုန်းဘုန်းတို့သည်လည်းကောင်း…။
မိဘလက်ငုတ်….လယ်မြေယာသိမ်းခံ ….စားမရာ နေစရာ ခက်ခဲ …ကျောမွဲလှသည့်..
ဒုက္ခိတ နွယ်ဝင် သည့် အပြင် ရေနစ်သူ ၀ါးကူထိုးသလို….စောက်ရူးယောင် မှ ခွေးခေါ်ခံရရှာလေသည့်
ကျေးဇူးရှင် ထမင်းရှင် လယ်သမား ယာသမား ဦးကြီးတို့သည် လည်းကောင်း…။
ကျောင်းသား….စစ်သား …ဘုရားသား…လယ်သမား…ဆင်းရဲသား များ၏ ရှေ့ဆောင်…
ပြည်သူကို တကယ် ချစ်သော…ပြည်သူ့ အတွက် အနစ်နာ ခံ ဘ၀ ကို စတေးဝံ့လေသော…
အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါ်ရာနောက်….ယုံကြည်စိတ်ချ….ငတို့ တော့ လွတ်မဟ
ဆိုသော စိတ်ဓာတ်အားပြင်း သံဒ္ဓိဌာန် တင်းရင်း…..
အမိမြေပေါ်မှာ လေးလံလှစွာ ထမ်းပိုးထားကြရလေသော….ဆန်ကုန်မြေလေး…
တစ်စုကို မိမိတို့ ဂုတ်ပိုးပေါ်မှ ကိုင်ပေါက် ချသည့် အနေဖြင့်… ဂုတ်ခွစီးထားသော…
၂၀၀၈ နာဂစ် အ မင်္ဂလာ ခြေဥကြီးကို ပြင်ဘို့ရန်…. ညီကြလော….ညွတ်ကြလော့ …။
မျက်စိကိုဖွင့် နားကိုစွင့်ကြလော့ ….။
သမိုင်းမရိုင်းအောင် ….မအ ကြနဲ့လော…..။ ဒီတချီမှ မညီ….ရှေ့ မှာမလွယ်တော့ပြီ …
အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀ိုင်းရံကြလော့ ….။
ငတို့ရဲ့ ထိုက်တန်သော ပြည်သူ့ သမ္မတ ဖြစ်အောင်…တင်မြှောက်ကြလော့ …. ။
( Scuba Som )